FFSensity APK ho an'ny Android 2022 Download (v3.0)
Izao no fotoanan'ny lalao an-tserasera ary ny lalao an-tserasera dia fironana manerana izao tontolo izao. Ankehitriny isika dia eto miaraka amin'ny fampiharana antsoina hoe FFSensity Apk, izay fitaovana tsara ho an'ny lalao Garena Free Fire. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia milalao lalao amin'ny Internet ho an'ny fialam-boly, fa maro ny mpilalao no tena matotra. Manao ny lalaony amin'ny fanoloran-tena tanteraka izy ireo.
Ka ireo mpilalao ireo dia manome antoka fa marina daholo ny zava-drehetra. Manamarina izy ireo raha mifanaraka amin'ny lalao sy ny toerana hafa ihany koa ny fifehezany. Misy zavatra iray izay mankahala ireo mpilalao Pro rehetra amin'ny lalao ataon'izy ireo ary izany no olana mihemotra. Tena mahasosotra izany rehefa manandrana mikendry ny mpanohitra anao ianao fa noho ny fanemorana anao dia mamono anao ny mpanohitra anao. Eto izahay miaraka amin'ny vahaolana amin'izany.
Ny zava-dehibe indrindra mandritra ny lalao an-tserasera dia ny fahatsapana ary ny fahatsapana FF dia hanampy anao amin'izany. Raha tsy milamina ny filalaovana ary mihemotra tsy an-kijanona dia tsy misy fomba handresena lalao na hamonoana tokana aza amin'ny lalao iray manontolo. `` Ity rindranasa ity dia hanampy anao amin'ny fifehezana ireo olan'ny lag ary hampandeha tsara ny lalaoo.
Ny fampiharana dia amin'ny teny espaniola amin'ny alàlan'ny default ary tena mora azo ho an'ny mpiteny teratany izany saingy mety ho sarotra ho an'ny hafa izany dia homenay anao ny fampahalalana feno momba ny fisehon'ny fampiharana mba hahatonga azy ho takatry ny rehetra.
Rehefa manomboka ny fampiharana ianao dia mahazo lohateny roa. Ilay voalohany milaza hoe "CONFIGURACOES DO CELULAR" izay midika hoe manamboara fikirana finday ary rehefa avelanao izy io dia manokatra lohateny roa. Ilay Frist iray dia miteny hoe "VELOCIDADE DO PIONTEIRO" izay midika hoe mifehy ny hafainganam-pandehan'ny tondro ary azo apetraka amin'ny alàlan'ny fampiasana ny safidy azo etsy ambany. Amin'ny zana-dohateny faharoa dia azonao atao ny mampandeha na mampandeha ny safidin'ny Bugs reducer izay hosoratana ho REDUZIR BUGS 360.
Rehefa tonga any amin'ny lohateny faharoa ianao, izay voasoratra hoe "CONFIGURACOES DO FREE FIRE" rehefa avelanao izany, dia mahazo safidy bebe kokoa ianao amin'ny fanamboarana ny firafitry ny lalao. Ny safidy voalohany dia ny "SENSIBILIDADE GERAL" izay midika hoe fahatsapana ankapobeny amin'ny lalaonao ary misy safidy hafa milaza hoe "SENSIBILIDADES DAS MIRAS" izay midika hoe fahatsapan'ny fomba fijery.
Misy safidy fahatelo milaza fa "IMPULSIONAR INICIO PARTIDA" dia azo ampiasaina hanamafisana ny fiaingana. izany Fitaovana Sensi dia fonosana feno ho an'ny mpilalao Pro hahazo ny baiko momba ny lalao.
Endri-javatra lehibe an'ny FFSensity Apk
Maimaimpoana ampiasaina ary tsy misy fividianana rindrambaiko.
UI tsotra ho an'ireo miteny espaniola.
Miasa amin'ny fanavaozana farany rehetra.
Size 25.69 MB
Anaran'ny fonosana com.ffsensity.thzzyt
Ilaina ny Android 5.0 sy ambony
Ara-dalàna ve ny fampiasana azy?
Ity dia fampiharana ara-dalàna hampiasaina satria tsy misy ifandraisany amin'ny karazana hack amin'ny lalao ofisialy. Io dia ampiasaina hanatsarana ny kalitaon'ny lalao fotsiny.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ity fampiharana ity dia misy ifandraisany amin'ny karazana hacking rehetra. Mikasika ny fiarovana dia tsy izahay no developer ofisialy ho an'ny fampiharana ity ka tsy afaka manome antoka anao izahay. Nanome rohy fampidinana azo antoka ho an'ny fampiharana izahay ary miankina aminao izany raha tianao ny misintona azy na tsia.
Ahoana ny fampidinana FFSensity Apk?
Ity dia misy fampiharana ao amin'ny Google Apps Store, azonao atao ny mametraka azy mora foana avy eo. Azonao atao koa ny misintona ny Apk amin'ireo rohy nomena ao amin'ilay lahatsoratra. Hanomboka ny fampidinana anao aorian'ny paompy iray amin'ny bokotra fampidinana.
Ahoana ny fametrahana FFSensity Apk?
Raha misintona ny Apk amin'ny rohy nomena ianao dia tsy maintsy manaraka dingana tsotra izay ilaina amin'ny fametrahana.
Voalohany, mandehana any amin'ny Setting an'ny telefaoninao> Fandriam-pahalemana ary omeo fidirana amin'ny fametrahana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Tadiavo ny Apk alaina avy amin'ny mpitantana rakitra ary kitiho eo aminy.
Rehefa manomboka ny mpamosavy fametrahana dia tsindrio ny bokotra install.
Tsy maintsy miandry ianao mandra-pahatapitry ny fizotrany ary kitiho ny bokotra Vita.
Ho vonona hampiasa ny fampiharana anao.
Taraiky loatra ve ny lalao ataonao? Avy eo ity ny vahaolana farany amin'izany. Sintomy ny Apk ankehitriny ary fehezo ny fametrahana ny lalao ary ajanony tsy ho tara izy.
Raha mila fampiharana misimisy kokoa, dia mitsidika ny anay hatrany Website.
Sokajy Games, Tools Tags FFSensity, FFSensity Apk, FFSensity App, Fitaovana Sensi Post Fikarohana
Real Codiguin Apk Download Ho an'ny Android [FF Code Redeem]
Hevitra 3 momba ny "FFSensity APK ho an'ny Android 2022 Download (v3.0)"
Novambra 10, 2020 amin'ny 5: 31 pm
Novambra 20, 2020 amin'ny 9: 50 pm
May 9, 2021 amin'ny 6: 30 am